Gasa oti gitare uku, badza uku Thursday, 23 May 2013 07:06	naAbel NdookaMUIMBI Romeo Gasa haasi kungopedzera shungu pakukwenya magitare bedzi asi kuti ave kupura mari nekurima chibage nesoya bhinzi kupurazi rake riri kuMhangura.Gasa, uyo anove chizvarwa chekuChinhoyi, anoti akarima chibage chakawanda pamwe chete nehekita rimwe chete resoya bhinzi.
‘Malawi hokoyo’	Thursday, 23 May 2013 06:55	naBlackmore Mavura MAKWIKWI makuru enhabvu ari kutarisirirwa nemusi weMugovera kuKamuzu Stadium kuMalawi uko chikwata chenhabvu cheZimbabwe chemaWarriors chichange chichisangana nechenyika iyi chemaFlames pamutambo weushamwari.
Zim cricket yakadadisa: Mangongo	Thursday, 23 May 2013 06:54	neMunyori weKwayedzaSTEVE Mangongo, uyo akafanobata chigaro chemurairidzi wechikwata cheZimbabwe Cricket, anoti chikwata chake chakabata basa rinodadisa apo pachakasangna necheBangladesh mumitambo yeTest match, One Day International neyeT20 series masvondo adarika.
Mosquito oda kutanga chikoro chetsiva	Thursday, 23 May 2013 06:52	neMunyori weKwayedzaYAIMBOVE shasha yemutambo wetsiva iine bhande reCommonwealth muchikamu cheflyweight, Zvenyika ‘Mosquito’ Arifonso, anoti chido chake parizvino kwave kutanga zvikoro zvinodzidzisa tsiva kunzvimbo dzakasiyana munyika.
Andy Carroll woenda kuLiverpool	Thursday, 23 May 2013 06:51	WEST Ham yakabvumirana nechikwata cheLiverpool kuti itenge mutambi wacho wemberi, Andy Carroll, zvachose. Liverpool iri kutarisirwa kutambira mari inosvika 12 miriyoni paunzi iyo inogona kuzokwidzwa nematambiro anenge achiita mutambi uyu kuchikwata chake chitsva.
‘Monya for hire’ simbi yeDeMbare
Asiagate yakandipedza mafuta: Masomere Chidzambwa nhabvu tsve!
« Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End »	Page 1 of 510	Search	Sponsored Links